Etu esi bulite foto na vidiyo na Instagram mfe | ECommerce ozi ọma
Etu esi bulite foto na vidiyo na Instagram
Netwọk mmekọrịta Instagram Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị ebudatara ma jiri rụọ ọrụ n'ụwa niile, ojiji ya n'oge a bụ isi, yana ụzọ mgbasa maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọdịbendị, egwuregwu na azụmahịa, nke na-enweta ego nke ọtụtụ puku ndị ọrụ kwa ụbọchị. Site n'ebe ọ bụla n'ụwa, ọ bụrụ foto, vidiyo ma ọ bụ akụkọ, ngwa ahụ nke malitere dị ka obere ọrụ maka ndị na-eto eto, mechara bụrụ otu n'ime ihe ịga nke ọma nke netwọkụ mmekọrịta, nke onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi mechara zụta, Mark Zuckerberg, ugbu a onye nwe Facebook na WhatsApp.
Ngwa Instagram na-enye ngwaọrụ kachasị mma ka anyị nwee ike idezi ma bipụta mbipụta anyị, bulite foto site na itinye nzacha dị mfe, nkwụsị, mmezi agba, ọnọdụ ebe akpọrọ ya, ịme ndị ọrụ na-egosi na foto ahụ, yana ihe ndị ọzọ.
Usoro maka biputere foto Ọ bụ otu ihe ahụ, n'ụzọ dị mfe ma dị mfe anyị ga-akuziri gị otu esi eme ya yana ngwaọrụ niile dị n'akụkụ nke ị nwere ike iji mee ihe.
1 Etu esi bulite foto na Instagram
1.1 Ndụmọdụ maka ibudata vidiyo na Instagram
2 Belata ibu na oge nke vidiyo ahụ.
3 Etu esi bulite vidiyo na Instagram
4 Etu esi bulite vidiyo toro ogologo na Instagram?
4.1 Wayzọ ọzọ bụ site na ịkekọrịta akụkọ ndụ
Etu esi bulite foto na Instagram
Ihe mbụ ị ga - eme bụ itinye ngwa ahụ, doro anya na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa App, ị ga - emepụta akaụntụ ọhụrụ ma ọ bụ tinye na akaụntụ Facebook gị, ozugbo abanye, na windo isi ị ga - ahụ akara ngosi 5 na ala nke panel ahụ, nke na-anọchite anya omume ụfọdụ. Ihe kachasị mkpa bụ nke dị n'etiti ndị ọzọ niile, ị ga - emerịrị ya pịa na akara ngosi “+” ka ịga n’ihu.
Mgbe e mesịrị, ị ga-enwe ọganihu na taabụ ọhụrụ, ebe foto niile dị na mkpanaka gị na-apụta. Y’oburu na ihe oyiyi ichoro ibughari bu nke na adighi anya, igha enweta ya n’elu igbe mbu; ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, enwekwara nhọrọ ịlele site na folda. N'akụkụ a ị nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ karịa onyonyo ka ebipụta n'otu akwụkwọ, ozugbo ahọpụtara pịa Na-esote.
Site na nke a, ogwe ọzọ ga-emeghe na onyonyo ma ọ bụ onyonyo ị ga-ebugo, yana nhọrọ dị iche iche ị nwere iji dezie ya. Ọ bụ n'akụkụ a ebe ị nwere ike itinye nzacha nke mmasị gị, ma ọ bụ gbanwee ogo ya, ọdịiche, njupụta, nchapụta, onyinyo, nhụjuanya, n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike ịnwale, ozugbo mbipụta ahụ gwụrụ, pịa na nhọrọ "Osote".
Nzọụkwụ ikpeazụ ị ga-agbaso iji bipụta onyonyo nke ọma bụ nke kachasị mfe, naanị ị ga-agbakwunye nkọwa nke ihe ị chere na-akọwa foto ma ọ bụ onyonyo na-enyere aka ịghọta ihe ị gosipụtara na onyonyo ahụ, oghere ị nwekwara ike ịhapụ efu, na nhọrọ nke aka gị, ịnwere ike ịgbakwunye ebe ebe esere foto ahụ, pịa ndị ọrụ ndị ọzọ pụtara na foto ahụ yana ngwa nke ịchọrọ ka ekekọrịta ya n'otu oge, dịka Facebook, Twitter ma ọ bụ Tumblr, iji melite arụpụtaghị gị na netwọkụ mmekọrịta ma bulite n'otu mbipụta, otu foto ahụ na netwọkụ mmekọrịta dị iche. Mgbe ị nwere ihe niile njikere, pịa share.
Ozugbo ị ga-enwe ike ịlele etu eserese ihe oyiyi ahụ na netwọkụ mmekọrịta kwekọrọ, ị ga-ahụkwa otu esi akpọtụrụ ndị kọntaktị gị ma mepụta ụmụazụ ọhụrụ.
Cheta na Instagram nwere nzacha ndị nne na nna yabụ amachibidoro ịbugote ọdịnaya ndị okenye.
Ọ bụrụ n ’ị chere na onyonyo gị anaghị ele anya n’ụzọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na ọ nwere ike ịka mma, ịnwere ike ibudata ngwa ndị ọzọ dị ka InstaSize, nke na - enye gị ohere bulite foto panoramic, ma ọ bụ jiri akpịrịkpa ndị ọzọ, na - edozi ha kpam kpam na Instagram, yabụ ị nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya gị niile na - enweghị oke, chefuo na foto zuru ezu apụtaghị ma ọ bụ na ihe dị mkpa egbutu, gị nwekwara ike ịgbakwunye Nnukwu mmetụta na okpokolo agba iji tinye ọtụtụ ihe izizi na post gị.
Na mgbakwunye na ị na-ebugote foto site na mkpanaka gị, enwere ike ibipụta ha na kọmputa gị. Maka nke a, enwere ọtụtụ ụzọ, nke anyị ga-akuziri gị ebe a bụ iji mgbatị Chrome akpọrọ Onye ọrụ ihe nnọchi anya. Ngwaọrụ a dị ike na-arụ ọrụ nke ịgbanwe onye ọrụ ahụ, na-eme ka ngwa ngwa Instagram kwenye na a ga-ebudata mbipụta ahụ site na mkpanaka gị ma si otú a rụọ ọrụ ahụ na-enweghị nsogbu ma ọ bụ ọdịiche ọ bụla, ebe ikpo okwu maka PC bụ otu ihe ahụ. nke mobile naanị na o doro anya na ibu graphic akpịrịkpa.
Na-esote, a kọwara ya n'ụzọ zuru ezu otu esi etinye mgbakwunye ma tinye ya n'ọrụ iji rụọ ọrụ ahụ akọwapụtara na mbụ.
Instagram na-enye ohere, site na aghụghọ nke Google Chrome, na-ebugote onyonyo na enweghị nsogbu. You nwere ike ịhọrọ ikpo okwu nke anyị chere na anyị na-eme nchọgharị, ma ọ bụ gam akporo, dị ka iOS, Windows Phone na ndị ọzọ, nsonaazụ dị ezigbo n'etiti ha.
Ugbu a, ị mụtalarị mfe nke ị nwere ike bulite onyonyo, ugbu a ọ dị mkpa na ị maara na ị nwekwara ike bulite vidiyo na akụkọ, na nso nso a nwere ọwa nke gị na vidiyo dị ogologo.
Ndụmọdụ maka ibudata vidiyo na Instagram
Iji nwee ike bulite vidiyo ị dere na mbụ ị ga-atụle ọtụtụ akụkụ tupu ị bulite ha:
Ogologo vidiyo ahụ, ebe ọ bụ na ihe ntanetị Instagram na-enye ohere ibudata vidiyo pere mpe karịa 20MB.
Na oge nke video kwesịrị a kacha nke 1 nkeji.
Belata ibu na oge nke vidiyo ahụ.
Enwere ọtụtụ nhọrọ na ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, enwere peeji ndị na-enye anyị ohere ịpịkọta vidiyo iji belata oke ya ma n'otu oge ahụ họrọ 60 sekọnd anyị chọrọ ibipụta na Instagram. Otu n'ime peeji ndị a bụ Vidiyo na ntanetị - tọghata, webụsaịtị a na-enye gị nhọrọ ịhọrọ usoro nke ịchọrọ ịbupụ yana oge ahụ, ị ​​gaghị enwe ike ịgafe nkeji oge enyere, mana ọ bụrụ na ihe ị chere bụ ibufe ihe omume zuru oke, ịnwere ike bulite ọ dịka akụkọ ndụ, nke na-enye ohere ka ihe karịrị otu awa ịdekọ.
Etu esi bulite vidiyo na Instagram
Ozugbo anyị nwere vidiyo anyị nwere oge na ibu kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike bulite ya na profaịlụ nke Instagram anyị, otu esi eme nke a bụ otu ihe ahụ dị ka ibugo foto, site na ịpị akara + ahụ, ịhọrọ vidiyo ịchọrọ ma nwee ike iji dezie ya iji nye ọdịdị kachasị mma.
Ma ọ bụ ịnwere ike bulite vidiyo na akụkọ, nke ga-adịru awa 24 maka ndị na-eso ụzọ gị wee hụ na ọ ga-apụ n'anya, atụmatụ dị ka Snapchat, nke nwetala ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, na-ekerịta onyonyo na vidiyo nke ihe ruru 15 sekọnd na nzacha na mmetụta pụrụ iche na Ha dị mfe iji, nke egosiri na ala na ngalaba nke akụkọ ntolite gị.
Etu esi bulite vidiyo toro ogologo na Instagram?
Ha na-ekwu na enweghị oke maka mmadụ, yana anyị na-achọta ụzọ iji belata usoro ahụ, Instagram abụghị otu, yabụ m ga-akụziri gị ụzọ abụọ bulite vidiyo dị ogologo na akaụntụ gị.
Igodo bụ Instagram Akụkọ n'ime nke ị nwere ike biputere vidiyo nke ruru 15 sekọnd, mana enwere ngwa ndị ga - enyere gị aka bulite vidiyo dị ogologo, belata obere vidiyo nke 15 sekọnd nke usoro ihe ị na - egosi anaghị efu, na mgbakwunye inwe ike ịhazi usoro mmepụta iji mee ka onyonyo panoramic dịkwuo mfe.
Akụkọ cutter (dị maka n'efu naanị maka gam akporo): Nhọrọ a na-enye gị ohere ibelata vidiyo gị ogologo ọ bụla ọ bụghị naanị obere vidiyo 15-nke abụọ. Otú ọ dị, ọ bụ a bit ogologo karịa iOS ngwa.
Akụkọ Splitter (nke a na-enweta n'efu maka naanị iOS): Kewaa vidiyo gị ogologo na obere vidiyo nke 15 ka ị ghara ida n'ihu. Ngwa a na - akwụghị ụgwọ nwere ụdị PRO, maka $ 1 nke ga - enyere gị aka ịgbasa nhọrọ ndị dịnụ ma nwee ike bulite vidiyo dị mma na akụkọ gị.
Wayzọ ọzọ bụ site na ịkekọrịta akụkọ ndụ
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịkekọrịta ihe na-eme n'oge a, ọ kachasị mma ịme ndekọ ndụ kama ịdekọ ya na ibudata vidiyo mgbe e mesịrị, echefula oge ahụ, ma mee ndị ọzọ ahụ, iji jikọọ na oge niile gị na ndị na-eso ụzọ gị na ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na-eme, si otú a na-enwetakwu echiche, oke uru nke na-ebugote vidiyo vidio bụ na ọ na-enye gị ohere ibudata ihe dị ka elekere 1 n'ime ọdịnaya n'otu ndekọ, yabụ na-ezere ọrụ nke ibudata ngwa ndị ọzọ iji bulite vidiyo dị ogologo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Etu esi bulite foto na vidiyo na Instagram
I meela nke ukwuu maka ozi m na-amaghị maka ụzọ m ga-esi dekọọ ya na otu esi enweta ihe niile edere ka ahụ gị
Enweghi m nhọrọ iji bulite vidiyo ma ọ bụ onyonyo site na instagram n'agbanyeghị agbanyegoro m tinye mgbakwunye-Onye Ọrụ Onye Ọrụ Ihe Ntụgharị. Ọ kwesịrị na m ga-amalitegharị ma ọ bụ gịnị ka m kwesịrị ịme? Daalụ
Atụmatụ SEO iji gbanwee azụmahịa gị ka ọ bụrụ otu n'ime azụmahịa E-commerce
Re ere ere, ụzọ aghụghọ na ecommerce